25 / 06 / 2021 25 / 06 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 249 Views စာ0မှတ်ချက် 75827 မီးသတ်ဌာနချုပ်artအဖွင်, Adobe က, Apple, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, မင်္ဂလာပါ, Ghostbusters, iMovie, iPhone ကို, Lego, Lego YouTube, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ, တွစ်တာ, YouTube ကို
စာရေးသူနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ Emma Kennedy ကသူမကိုယ်တိုင်မည်သို့စတင်ခဲ့ပုံကိုဖော်ပြသည် Lego YouTube ရုပ်သံလိုင်းနှင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်ရည်ရွယ်သောအကြံဥာဏ်အချို့ပေးထားသည်။
ဒါဟာရှည်လျားသောဖြစ်စဉ်ကိုဆောင်ခဲ့ခဲ့ပါတယ် အုတ်တွေနဲ့ဖြေပါ အသံ၊ မီးနဲ့ကင်မရာတွေရဲ့ပုံမှန်ပြifနာတွေကိုငါကြည့်နေရင်းဒီနေ့ဘယ်မှာလဲ၊ ငါရိုးသားမယ်ဆိုရင်၊ စမ်းသပ်မှုအမှားအယွင်းတစ်ခု၊ ထိုင်ခုံ -The-the-pants ကတွားသွားတယ်။
ငါလိုင်းချန်နယ်စတင်သောအခါ, ငါ့ဆောက်လုပ်ရေးပိုပြီးပြသဖို့တောင်းခံရခြင်း၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ st ရှိခဲ့ပါတယ်artငါအားကြီးသော Ghostbusters 75827 Firehouse Headqu ကိုယူစဉ်တွစ်တာတွင်တိုတောင်းသော၊ နှစ်မိနစ်ဗီဒီယိုတိုပို့ခြင်းartဒါပေမင့်အကယ်စင်စစ်ရုပ်ရှင်တွေဟာအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဟာငါ့ကစားပွဲကိုတက်ရတော့မယ်ဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်။
အစောပိုင်းရုပ်ရှင်များသည်အလွန်အခြေခံကျသည်။ စကားပြောဆိုရန်အစစ်အမှန်အလင်းများမရှိ၊ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေသောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏သုံးချောင်းထောက်တိုင်ပေါ်တွင် iPhone ဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှလူအများအပြားကြည့်ရှုလာသည်နှင့်အမျှသင့်တော်သောအလင်းရောင်နှင့်အသံကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ခြားနားချက်ကြီးမားသည်။
သင် st အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်artသင့်ကိုယ်ပိုင် ing Lego ရုပ်သံလိုင်းတည်ဆောက်ရန်၊ သင်မသွားမီနည်းပညာပစ္စည်းများကိုနေရာယူထားရန်သင့်အချိန်သည်အမှန်ပင်ထိုက်သည်art။ ဘယ်မှာဆောက်မလဲ။ slick speed building အတွက်ကြားနေဖြူသေတ္တာနောက်ခံလိုချင်ပါသလား။ မင်းရဲ့ကင်မရာကိုဘယ်နေရာမှာလိုချင်လဲ သင့်ဘယ်သန်၊ ညာသို့လား မင်းရဲ့ရင်ဘတ်မှာလား၊ အပေါ်ယံလား၊ ရှေ့မှာလား၊
အမ်မာ၏ YouTube အသံဖမ်းကိရိယာအချို့။
သင်တည်ဆောက်နေတာကိုမြင်နိုင်ပါသလား။ အရာအားလုံး lit ရှိသည်ဖို့ကယ့်ကိုအရေးကြီးပါတယ် ကျွန်ုပ်တွင် overhead dedicated lights နှစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်မဟာဗျူဟာကျကျထားရှိသောလက်စွပ်စုံတွဲတစ်တွဲသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မီးများပေါ်တွင်ငွေအမြောက်အမြားသုံးစွဲရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်အဆင်သင့်မဖြစ်မှီစတူဒီယိုပုံစံအလင်းရောင်တွင်ရင်းနှီးရန်မသင့်ပါ။ သို့သော်သင်၏တည်ဆောက်မှုနေရာကိုတည်ဆောက်ပြီး၎င်းကိုထွန်းလင်းရန်အရေးကြီးပါသည်။
အသံထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မဟာရုပ်ရှင်အရည်အသွေးကောင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့လျောက်ပတ်သော lapel မိုက်ကရိုဝဲလ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အချိန်အနည်းငယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းမတိုင်မီကျွန်ုပ် iPhone တွင်အထဲ၌ထည့်ထားသောမိုက်ကရိုဖုန်းကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စောစော RWB ရုပ်ရှင်များကိုယခုငါလုပ်ခဲ့သည့်အရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကခြားနားမှုမှာကြီးမားသည်။ ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုပါဘဲ။ အကယ်၍ အသံသည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်လျှင်၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရယူပါ။ သင်၏အကြီးမားဆုံးသောခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ငါဟာငါ့ရဲ့ iPhone နဲ့အတူရှိနေတယ်။ အဲဒါကငါ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်။ settings သုံးခုရှိတယ်။ ဒီတော့ငါကအပြင်ကိုထွက်နိုင်တယ်၊ နောက်ပြီးနေ့စဉ်ရုပ်ရှင်တွေကိုအတူတူချုပ်ပေးတယ်။ ငါကဏ္putများကိုအတူတကွထားရန် iMovie ကိုအသုံးပြုသည်။ ခေါင်းစဉ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ယခုကြည့်ရှုသူများမှပေးသောဂီတနှင့်အတူငါလှည့်နေသောရိုးရှင်းသောကာတွန်းနှစ်ခုရှိသည်။
သင် YouTube ၌တင်ပါကဂီတသည်မိုင်းတွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်သီချင်းကိုမဆိုအသုံးပြုရန်ကောက်ယူသောအလွန်တင်းကျပ်သောမူပိုင်ခွင့်စည်းမျဉ်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးသော algorithms များရှိသည်။ သို့သော်သင်အသုံးပြုရန်သွေးဆောင်ခံရနိုင်သည်။ သင်အတွက်ဂီတအတွက်လိုင်စင်များ ၀ ယ်ယူနိုင်သောဆိုဒ်များရှိသည်။ - Adobe တွင်ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ချက်ရှိသည်။ သင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသောတီးလုံးအနည်းငယ်ရသင့်သည်။
Emma ၏လက်ရှိယူကျု့အသံဖမ်းယူမှုတည်ဆောက်ပုံ Lego သွန်းလောင်း။
သို့သော်သင်စဉ်းစားရမည့်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာ၎င်းတို့အားထုတ်ပယ်လိုက်သောအခြားလူများနှင့်မတူသည့်အရာတစ်ခုကိုသင်မည်သို့လုပ်မည်နည်းဖြစ်သည် Lego မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာအများစုသည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ မင်းကိုသတ်မှတ်ပေးမယ့်စားပွဲပေါ်မှာဘာတွေသွင်းမလဲart? ဘာကိုအောင်မြင်ချင်တာလဲ
သင်တည်ဆောက်နေတာကိုမျှဝေချင်ပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရပ်ရွာတစ်ခုတည်ဆောက်ချင်ပါသလား။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၏ Lego ရုပ်သံလိုင်းထုံးစံသာတည်ဆောက်နိုင်သလဲ (သို့) လွယ်ကူတဲ့သင်ခန်းစာများကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ၊ ပုံမှန်တင်ပါ၊ မျှော်လင့်ပါကအချိန်တန်လျှင်လူတို့သည်သင်၏ရုပ်သံလိုင်းကိုရှာဖွေပြီး၎င်းနှင့်အတူပါလာလိမ့်မည်။
ငါနှေးကွေးစွာတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ RWB ဟာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်၊ ဟာသအကြောင်းအရာနဲ့ပျော်စရာကိုအလေးပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်အသံအကျိုးသက်ရောက်မှုစက်များ၊ ပုံမှန်ကြည့်ရှုသူများ၏အသေးအမွှားပုံများ၊ အသံများ၊ ဆောင်ပုဒ်တီးလုံးများနှင့်ဖမ်းစားသောစကားလုံးများရှိသည်။ ဒါကိုလုပ်တာကအတူတူဆိုတဲ့သဘောကိုဖန်တီးတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AFOLWAC (လူကြီးပရိတ်သတ်များ၏) Lego Who Are Chums သည်ဂိုဏ်းနှင့်လူတို့ကသူတို့ပိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။
ငါတို့ရှာဖွေနေတာကငါတို့နာမည်ကိုလူတိုင်းသိတဲ့နေရာပါ။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ RWB မှာအတော်များများတွေ့ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ start မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချန်နယ်, သင်အရမ်းရှိုခံစားရလျှင်!
← LEGO BrickLink ဒီဇိုင်နာစီမံကိန်း၏စီမံကိန်းနှစ်ခုသည်ထုတ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ
BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်၏သစ်တောရဲတိုက်သည်၎င်း၏ ဦး ထုပ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြသည် classic Lego ဆောင်ပုဒ် →